Why did you resign from your the previous job? ﻿
Why did you resign from your the previous job?
Tags: the most common interview questions resign previous works.
ဒီမေးခွန်းကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေပြ မေးခွန်းပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးခဲ့မှုတွေကို မှတ်ကျောက်တင်တဲ့ မေးခွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေးတဲ့ မေးခွန်းက တိုပေမယ့် ဖြေရမယ့် အဖြေက အလုပ်ရရှိရေးအတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အတိမ်း အစောင်း မခံပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာရင်………..
အများစု ဖြေတတ်ကြတာက ကျောင်းပညာရေးကြောင့်၊ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ကြောင့်၊ ကျန်းမာရေး ကြောင့်နဲ့ လစာမတိုး ရာထူးမတိုးတာတွေကြောင့် ဆိုပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြေသင့်တဲ့ အဖြေကတော့ ယခင် အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို အခြေခံပြီး ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်စတာတွေကို ရှာဖွေလိုမှုကြောင့်လို့ ပြောရင် အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ဒီလိုဖြေတဲ့အခါ ယခုအလုပ်က ယခင်အလုပ်ထက် ပိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ထင်မြင်မိကြောင်း ထည့်ပြောဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။
လုပ်ခလစာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပြောမိပါစေနဲ့။ ဒီလိုပြောခဲ့ရင်တော့ အခွင့်အလမ်းနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ငွေကြေးက ပိုအရေးပါတယ်လို့ အလုပ်ရှင်က ထင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ဆိုတာ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲ့ တည်ဆောက်တာ မဟုတ်ပဲ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အတတ်ပညာ စတဲ့ အခြားသော လူ့ဘဝ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေက အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ်နေတာကြောင့်ပါ။ www.jobless.com.mm